Kumba > Zvigadzirwa > Chitubu Matiresi > Inopfuurira Spring Matiresi
Kusaroorwa, Mambo Kusaroora, Kuzara, Mambokadzi, Mambo
Makore gumi nemashanu kushandiswa kwakajairwa
15,000 pcs pamwedzi
Flat yakatsindirwa + nhovo / yakakungurutswa kumusoro katoni / bhegi
Mazuva gumi nemashanu ekushanda ekugadzira sampu, mazuva makumi matatu ekushanda ekugadzirwa kwemazhinji
Memory Foam 5 nzvimbo dzeMuchirimo Matetiresi akagadzirwa nehomwe chitubu, iine 5 Nzvimbo yakakwira diki furo.
Hwemhando yepamusoro, yakashongedzwa, yemazuva ano dhizaini.
Chero saizi uye pateni zvinogona kugadzirwa.
1. Tsigira SPINE YAKO
Isu tinosuma premium yakasarudzika latex seyakanaka nyoro. Inoenderana nesimba nemuviri wako. Inotsigira iyo yakasarudzika kuenderana kwemuzongoza.
Iyo yepakati musimboti yakarongedzwa neepamusoro-density ndangariro furo, inotonhorera uye yakanyarara. Yekuyeuka furo pamhepo kupisa kwekunzwa, zvishoma nezvishoma inova yakapfava, uku ichidzvanya kumanikidza kwemuviri kugadzirisa muviri kune chinzvimbo chakanyanya kugadzikana.
3.ULTIMATE kumanikidzwa RURE
Isu tinoshandisa yakakwira diki furo sehwaro hwesimba nekusimba. Icho chinhu chakakosha kusanganisa pamwe neyekupedzisira kumanikidzwa kuregererwa uye kusaenzana nyaradzo.
Munhu wepakati anochinja nzvimbo dzekurara.
5.TENDA KURWADZA KWEMUVIRI
Rayson metiresi inotsigira iyo chaiyo yakaoma metiresi, iyo inonyaradza zvakanyanya muviri wako kurwadziwa.
6.15 MAKORE Guarantee YEMAHARA
Rayson chitubu chemetiresi, chakagadzirwa chakanatswa chitubu, makore gumi neshanu garandi yehupenyu hwematsutso.
Rayson kana OEM
Nyoro / Pakati / Zvakaoma
Mumwe, mapatya, akazara, mambokadzi, mambo uye akagadziridzwa
Yakarukwa jira / jacquad jira / Tricot jira | Vamwe
30cm kana yakagadzirirwa
Hotera / Imba / furati / chikoro / Guest
Zvidimbu makumi mashanu
Mharidzo mazuva gumi nemashanu, Mass kuraira mazuva 25-30
RSP-ML4 (Piro yepamusoro, 30cm Kureba)
Dzakarukwa jira, hwoumbozha uye hwakanaka
2cm yakakwira density memory furo
2cm furo yakaoma
Non rakarukwa jira
3cm yakakwira dofo furo
2cm furo nyoro
22cm 5 nzvimbo dzine Pocket chitubu nefuremu
isina kurukwa jira
1cm furo nyoro
rakarukwa jira, hwoumbozha uye hwomutambarakede
Hotera chitubu m attress Kukura
Mutoro / 40 HQ (bv)
Imwe XL (Twin XL)
Kaviri XL (Yakazara XL)
Saizi Inogona Kugadziriswa!
Chinhu chakakosha chandinofanira kutaura:
1.Zvingave zvakati siyanei nezvaunoda chaizvo. Muchokwadi, imwe paramende senge pateni, chimiro, kukwirira uye saizi inogona kuve yakagadzirirwa.
2.Pamwe iwe unovhiringidzika nezve chii chingangoita chakanyanya-kutengesa chitubu metiresi Zvakanaka, nekuda kwechiitiko chemakore gumi, isu tinokupa kuraira kwehunyanzvi.
3.Yedu yakakosha kukosha ndeyekubatsira iwe kugadzira imwe purofiti.
4.Tinofara kugovana ruzivo rwedu newe, ingotaura nesu.
Yepamberi yakarukwa jira
Rayson machira, curve yazvino dhizaini, kunyanya kune kitted machira, inofema, yakawanda eco-hushamwari uye yakasimba Iyo jira repakati rinoshandisa rakasviba ruvara ringave nyore kusiyanisa matatu materu mataresi, inonyatsoenderana neiyi metiresi.
Piro yepamusoro dhizaini
Matiresi mutsago wepamusoro dhizaini, zvakasiyana neyakajairika yakasimba kumusoro uye europe yepamusoro. Inoita kuti vanhu vataridze kumusoro upscale, yakashongedzwa yakakomberedza makona, yakasarudzika uye yemafashoni.
Kwakanaka kudivi rejira jira 3D dhizaini
Iwo mativi-matatu akakomberedza akasungwa zvakanaka, mitsara yakashambidzika uye yakaomarara, uye machira epadivi akapfava uye anofema.